देश पढेलेख्याले नै त बिगारेका होइनन् ? – Sirjana …….
देश पढेलेख्याले नै त बिगारेका होइनन् ?	कहिले काहि मेरो मनमा एउटा प्रश्न बारम्बार आइरहन्छ, “यो देश पढेलेख्याले नै त विगारेको होइनन् ?” पढेलेख्या मान्छेले त देश बनाउँछन् किन बिगार्छन् होला र ? कस्तो किसिमको प्रश्न हो यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकहि ।
Photo source: http://www.railelectrica.com
मालाई लाग्छ पढ्नलेख्न जान्नु र शिक्षित हुनुमा धेरै अन्तर छ । त्यसैले नै मलाई हाम्रो देश नेपाल बिग्रिनुमा पढेलेख्याको हात धेरै छ जस्तो लाग्छ । यस्तो लाग्नुको पनि कारण छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, देश संचालन गर्ने तीन अंगहरु छन् – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । अब यी तीन अंगमा को को छन् भनी हर्ेर्ने हो भने, कार्यपलिकामा मन्त्रिपरिषद र निजामति कर्मचारीहरु पर्दछन्, व्यवस्थापिकामा सांसद वा नेताहरु पर्दछन् र न्यायपालिकामा न्यायधिस र वकिलहरु पर्दछन् । यी क्षेत्रमा काम गर्ने निजामति कर्मचारीहरु भनेका स्नातक पास गरी लोकसेवा पास गरेर छानिएर आएका व्यक्तिहरु हुन् । नेताहरु पनि कुनै क्षेत्र वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जान्नेसुन्ने पढेलेख्या व्यक्ति नै हुन् । न्यायधिस र वकिल त वकालतमा उच्च शिक्षा हासिल नगरी हुँनै पाइन्दैन । अब हेरौ, यी सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको चरित्र कस्तो छ – निजामति कर्मचारीहरुलाई खुशी नपारी (वा सिधै भन्दा घुस नखुवाई) वरको सिन्को पर सार्दैनन् (अपवादलाई छाडेर) । नेताको द्वैध चरित्रले जनता हैरान नै भै सकेका छन् । न्यायपालिका माथि र्सवसाधारणको निश्पक्ष न्याय गर्छन् भन्ने विश्वास छैन । भनेपछि देश चलाउने प्रमुख निकाय माथि कसैको विश्वास र भरोसा छैन । उनीहरु जनतालाई सेवा सुविधा दिन बसेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेका पनि छैनन् जस्तो लाग्छ र कसैलाई बुझाउने चेष्टा पनि गरेका छैनन् । सेवाग्राही जनतालाई उनीहरु सेवा दिन बसेको भन्दा पनि लुट्न बसेको जस्तो लाग्छ । भन्ने बेलामा हाम्रो देश नेपाल गरीबीले बिग्रियो भन्दछन् तर के गरीबले कहिले अरुलाई सेवाबाट वंचित गरेको वा गराएको छ ?, के गरीबले कहिले घुस खाएको छ ?, के गरीबले कहिले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरेको छ ? त्यसैले मलाई “देश पढेलेख्याले नै त बिगारेका होइनन् ?” भनी बारम्बार सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
Author sirjanaPosted on मे 11, 2007अगस्ट 5, 2015Categories गन्थन मन्थन	5 thoughts on “देश पढेलेख्याले नै त बिगारेका होइनन् ?”	koinikesh भन्नुहुन्छ:	मे 14, 2007 मा 8:22 बिहान	Hola….Kina ki dharai pade lekhe pachi dimag bigrincha
जवाफ फर्काउनुहोस् adminnepalibloggers भन्नुहुन्छ:	मे 14, 2007 मा 8:22 बिहान	Thanks for submitting your blog in http://www.bloggers.com.np.
जवाफ फर्काउनुहोस् koinikesh भन्नुहुन्छ:	मे 14, 2007 मा 11:02 बिहान	No my blog is still not listed…ehehe….No problem
जवाफ फर्काउनुहोस् Ashish Lohorung Rai भन्नुहुन्छ:	मे 21, 2007 मा 11:16 बिहान	sirjana didi, ……did you read your site is listed in the bloggers.com.np…..cheers..
जवाफ फर्काउनुहोस् sirjana भन्नुहुन्छ:	अगस्ट 5, 2015 मा 5:02 अपराह्न	Reblogged this on Sirjana……………………. केहि गन्थन मन्थन र विचारहरु.
Previous Previous post: सम्बन्धको नवीकरणअर्को Next post: चेतना भया